शम्भु राईलाई प्रकाश सपुतको पत्र : हजारौं प्रकाश सपुत आए पनि तपाईंको इतिहास र अस्तित्व मेटिन्न « Naya Page
शम्भु राईलाई प्रकाश सपुतको पत्र : हजारौं प्रकाश सपुत आए पनि तपाईंको इतिहास र अस्तित्व मेटिन्न
मैले सोचेकै थिएन सर, लोकगीत गाएर यतिविधि चर्चित भइन्छ भनेर। बुढापाकाले मात्रै त्यो पनि पश्चिम भेगतिर सुनिने लोकदोहोरी गाएर कहिल्यै सेलिब्रिटी बनिन्छ जस्तो लाग्थेन। त्यसैले गति नै त छाडिएन तर अनेक तिकडम चैं लगाएकै हो। एकबारको जुनीमा गाउने इलम गरिसकेपछि २/४ जनाले चिनेनन् भने के गाउनु गाँठे भन्ने आत्मबोध भैरहन्थ्यो। त्यसैले गीतै गाएर पेट र परिवार पालेको भए पनि म कहिल्यै खुसी भइन। सपना ज्युँको त्युँ छ। भोक ज्युँको त्युँ छ भनेर निकै निराशामा गुज्रिरहेको थिएँ। कसोकसो दोहोरी ब्याटलले अलिअलि भोक मेटायो। त्यही चिनिने भोक क्या सर। पछि ‘बोल माया’ गर्दा मैले चिनिनेभन्दा सम्झिनेतिर अल्लि बढी ढल्केर काम गरेँ र आफूलाई अलिधेरै अंक बटुले दर्शक/स्रोताबाट। ‘ब्याटल टु’ ले मेरो परिचयमा थोरै प्रश्न उठायो। तँ को होस्? कताको मुन्छे होस्? भनेर अलिअलि नम्बर घट्यो पनि तर क्रियटिभिटीमा नम्बर त जोडिएकै हो। कहिलेकाहीँ उत्तर गलत हुँदा पनि अक्षर राम्रो भएर नम्बर पाइन्थ्यो नि सर स्कुलमा। त्यो पनि गणितमा, विज्ञानमा होइन नेपाली विषयमा। हो संगीत पनि नेपाली विषय जस्तै लाग्छ सर। गणितको, विज्ञानको जस्तो ठ्याक्कै उत्तर नमिले पनि मिठो भाषा लेख्न जान्यो भने, राम्रो अक्षर कोर्न जान्यो भने लगभग पास अंक त पाइने। १०० मा ३२।
हजारौं प्रकाश सपुत आए पनि तपाईंको इतिहास र अस्तित्व मेटिन्न सर। ल मानौं, कसैले अझै मिठो गरी ‘चिठी तिम्लाई’ दुरुस्त निकालेछ भनेपछि तपाईं मेटिनुहुन्न सर। तपाईको अस्तित्व आउँछ आउँछ।
गाउँमै हुँदा सुनेको भनेर तपाईंलाई मख्ख पार्दिनँ सर। काठमाडौं आएर दोहोरी साँझमा काम गर्न थालेपछि हजुरका धेरै गीत सहकर्मीहरुको आवाजमा सुनियो। आफूलाई रहर लागेर खोजीखोजी ओरिजिनल गीत सुनेर डायरीमा गीत टिपेर पनि गाइयो। ‘चिठी तिम्लाई’ र ‘तिमीले सम्झे नि लाखै छ’ भन्ने अक्सर अफर आउँथ्यो दोहोरीमा। सहकर्मीले गाउथे म अभिनय जस्तो गर्थे। हल्का रक्सीले मातेको बेला यस्तो गीतले अझै छुने रैछ कि मान्छेलाई कुन्नि ? पैसा पनि राम्रै झर्थ्यो। म चाहिँ रहरले ‘चलेछ बतास सुस्तरी’ गाउने प्रयास गर्थे। त्यसको पूरै अन्तरा याद छ सर मलाई। कतै माहोल जुरेछ भने म हजुरलाई सुनाम्ला गाएरै। तर कुन कसम खाएर भनौं सर यो ‘देउसी भैलो’ गीत मैले सुनेको थिएन। त्यसैले मैले कपी गरेको हुँदै होइन। पहिले नै रेकर्ड भैसकेको कुनै गीत पुन: रेकर्ड गर्छु र हिट बनाउँछु भन्ने आत्मविश्वास कसैमा हुन्छ जस्तो लाग्दैन सर। बरु पुरानो हिट गीतलाई रिमेक गर्ने, कभर गर्ने चलन बढेको छ। यो कति सही गलत- त्यता नजाऊँ। मैले यहाँ जोड्न खोजेको चाहिँ पहिला त्यति नसुनिएको, सफल नभएको गीतलाई रि रेकर्ड गरेर चलाइदिन्छु भन्ने कन्फिडेन्स ममा छैन सर। त्यो रिस्क तपाईंले त्यतिखेरै लिनुभयो। अब मैले किन लिन्थेँ र! अहिले त झन् खर्च बढेको छ सर। कलाकारको भाउ र पारिश्रमिक ह्वात्तै बढेको छ। खर्च उठाउने बिजनेस वे छैन। उसबेला जस्तो क्यासेटमा साइन गरेर पठाएको अनुभव हामीले गर्न पाइएन सर। अहिलेको अवसर र चुनौती भनेको मैले माथि जोडिसकेँ त्यही ‘भाइरल‘ हो। त्यो पनि फिरीको।
सर भाका मिलेकै छैन? कहाँ मिलेको छ? भनेर तपाईंको विचारलाई तपाईंको फिलिङसलाई तपाईंको प्रत्येक तर्कलाई म खण्डन गर्न चाहन्न। तपाईले आफैले भन्नुभएको थियो म तपाईंको छोराभन्दा पनि धेरै कान्छो उमेरको छु। तपाईं मेरो बुबाभन्दा पनि बढी उमेरको हुनुहुन्छ। यसकारण तपाईंको भोगाइ, तपाइको अध्ययन अनुभव, तपाईंको योगदान तपाईंको सफलताको अगाडि म धेरै बच्चा छु। उमेर अनुभव र समयले पनि म केटकेटी नै हो। एउटा स्रोता भएर सुन्दा ‘गलबन्दी’ र ‘आऊ नाचौं’ १/२ ठाउँ उस्तैउस्तै सुनिन्छ जस्तो मलाई पनि लाग्छ। ‘ओई, सुन् त मिलेको छ यार’ भनेर यी दुई गीत (अलिकति स्पिड बढाएर) फोर्सफुल्ली एकैचोटि सुनाउने हो भने जो कोहीको मनमा पनि आउँछ होला– हो त यार मिलेकै रैछ। तर अलि गहिरिएर सुन्ने हो भने ठ्याक्कै मिलेको चाहिँ छैन कि सर। कपी हुनलाई त पूरै र्‍याङ कि ठ्याङ मिल्नुपर्ने हैन र। सेम टु सेम भएपछि त फ्याट्टै चिनिन्छ सर। यसरी मत नै बाझिँदैन। हेर्नुस् त दर्शकहरु बाँडिएको। कसैलाई लाग्छ मिल्छ। कसैलाई लाग्छ मिल्दैन। त्यसैले यो दर्शकलाई भजाएर हामी कबड्डी कबड्डी जस्तो मिडिया/मिडिया नखेलौं सर।
आफ्नो व्यावसायिक नाफाघाटा नहेरी सांस्कृतिक महत्व बचाउन सबै विधि पुर्‍याएर ३२/३५ मिनेटको तिहार गीत बनाउन तपाईंलाई जरुरी थियो र सर? तिमीले सम्झे नि लाखै छ जस्तो अर्को खतरा आधुनिक गीत दिएर आरबिटीबाट झ्याम्म दाम बुझ्न सक्नुहुन्थेन र? म्युजिक नेपालसँग राम्रै सम्बन्ध छ तपाईको तर तपाईंलाई कलाकारिता गर्दा केवल नाफाघाटा मात्रै भन्दा पनि नेपाली लोक संगीतको! नेपाली मौलिक कला संस्कृतिको बिछट्टै माया रैछ सर। त्यति माया गर्ने मान्छेले एउटा अनुज भाइले अहिलेको समयमा मौलिकता झल्काउन गरेको प्रयासलाई अलिकति भाकाको प्रसंग लिएर निरुत्साहित नगरिस्यो न। हजारौं प्रकाश सपुत आए पनि तपाईंको इतिहास र अस्तित्व मेटिन्न सर। ल मानौं, कसैले अझै मिठो गरी ‘चिठी तिम्लाई’ दुरुस्त निकालेछ भनेपछि तपाईं मेटिनुहुन्न सर। तपाईको अस्तित्व आउँछ आउँछ।
तर यो मेरो वर्किङ आवर्स हो सर। सिर्जनशील हुन सक्ने र सोही अनुसार दौडिन पनि सक्ने उमेर हो मेरो। यो समयमा मलाई नअल्झाइस्यो न सर। म पनि केवल नाफाघाटा मात्रै भन्दा पनि केही फरक र राम्रो गर्न सकिन्छ कि भनेर धेरै रात अनिँदो बस्छु। गलबन्दीको लागि पनि मैले धेरै नै मेहनत गरेको छु सर। जहाँसम्म नाम राख्ने कुरा छ। यो धेरै लोक भाकाहरुबाट प्रभावित छ सर। यता पश्चिमतिरको भजनको ताल र रत्यौलीको लय मिस्रित छ भने हजुरको देउसीबाट पनि प्रभावित भएछ। अब कसकसको नाम राखौं सर। नाम में क्या चिज हे? अब यसै पनि आजको मितिसम्म सबैभन्दा छोटो समयमा करोड क्लबमा जाने गीत कुन हो भन्ने प्रश्नमा उत्तर आउँछ– गलबन्दी। तर उत्तर यतिमै सकिँदैन। ‘ए त्यो शम्भु राईसँग मिलेको गीत’ भनेर आउने भइक्यो।
( प्रकाश सपुतको वेबसाइटबाट)